ချစ်ရတဲ့ဖခင်ကြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ အတွက် ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ နက္ခတ် – Cele Posts
ချစ်ရတဲ့ဖခင်ကြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ အတွက် ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ နက္ခတ်
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…မင်းသားချော နက္ခတ်ဟာ ဆိုရင် MRTV-4 မှရိုက်ကူးတင်ဆက်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲပေါင်း များစွာကို ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းမှာ ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အတွက် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်မှုကို အပြည့်အဝရရှိ ခဲ့တဲ့မင်းသား တစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။သူ့ကို မင်းသားချော နက္ခတ်ဆိုပြီး ပရိတ်သတ်တွေရင်ရှိစေခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကတော့ ထာဝရမန္တလေး၊ အရိပ်၊ ကျွန်တော်အမုန်းဆုံး ကျွန်တော် စတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
မင်းသားချော နက္ခတ်ဟာ ဆိုရင် အနေအေးသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူ တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နက္ခတ်က ချစ်စရာကောင်းပြီး အနေအေးတဲ့ချစ်သူချောချောလေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ အခုလိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့နက္ခတ်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေတစ်ဆင့်ပရိသတ်တွေကို ဝမ်းနည်းဖွယ်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခု မျှဝေလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒါ ကတော့ “🙏🏻🙏🏻🙏🏻 13.5 .2021. 11:39pm ကျနော်ချစ် ရ တဲ့ အ ဖေကျနော်တို့ကို ထားသွားခဲ့ပီ အဖေ့ရဲ့ဆုံးမစကား တွေနဲ့သားဘဝကို အကောင်းဆုံး နေထိုင်ပါ့မယ်။ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻…….” ဆိုပြီါ် စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ရေးသားလာ ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နက္ခတ်ရဲ့ဖခင်ဆုံးပါးသွားခဲ့တဲ့ အတွက်လည်း ပရိသတ်တွေများစွာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးအားပေး စကားပြောနေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ချင်း စီတိုင်းကို အထူးပဲကျေးဇူးတင် ရှိပါတယ်နော်…။
Source: Nat Khat’s Facebook acc
ခဈြရတဲ့ဖခငျကွီး ကှယျလှနျသှားခဲ့တဲ့ အတှကျ ဝမျးနညျးစိတျမကောငျးဖွဈနတေဲ့ နက်ခတျ
ပရိတျသတျကွီးရေ…မငျးသားခြော နက်ခတျဟာ ဆိုရငျ MRTV-4 မှရိုကျကူးတငျဆကျနတေဲ့ ဇာတျလမျးတှဲပေါငျး မြားစှာကို ကရြာဇာတျရုပျတိုငျးမှာ ပီပီပွငျပွငျ သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ အတှကျ ပရိတျသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြမှုကို အပွညျ့အဝရရှိ ခဲ့တဲ့မငျးသား တဈလကျပဲဖွဈပါတယျနျော။သူ့ကို မငျးသားခြော နက်ခတျဆိုပွီး ပရိတျသတျတှရေငျရှိစခေဲ့တဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှကေတော့ ထာဝရမန်တလေး၊ အရိပျ၊ ကြှနျတျောအမုနျးဆုံး ကြှနျတျော စတဲ့ဇာတျလမျးတှဲတှနေဲအောငျမွငျမှုတှရေရှိခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော။
မငျးသားခြော နက်ခတျဟာ ဆိုရငျ အနအေေးသူ တဈယောကျဖွဈပွီး အနုပညာလုပျငနျးတှကေို ကွိုးကွိုးစားစား လုပျကိုငျနတေဲ့သူ တဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။နက်ခတျက ခဈြစရာကောငျးပွီး အနအေေးတဲ့ခဈြသူခြောခြောလေးကိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားတာဖွဈပါတယျနျော။ အခုလိုအောငျမွငျမှုတှရေရှိထားတဲ့နက်ခတျကသူ့ရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာကနတေဈဆငျ့ပရိသတျတှကေို ဝမျးနညျးဖှယျအကွောငျးအရာလေးတဈခု မြှဝလောခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
အဲ့ဒါ ကတော့ “🙏🏻🙏🏻🙏🏻 13.5 .2021. 11:39pm ကနြျောခဈြ ရ တဲ့ အ ဖကေနြျောတို့ကို ထားသှားခဲ့ပီ အဖရေဲ့ဆုံးမစကား တှနေဲ့သားဘဝကို အကောငျးဆုံး နထေိုငျပါ့မယျ။ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻…….” ဆိုပျွီါ စိတျမကောငျးစှာနဲ့ ရေးသားလာ ခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။နက်ခတျရဲ့ဖခငျဆုံးပါးသှားခဲ့တဲ့ အတှကျလညျး ပရိသတျတှမြေားစှာ စိတျမကောငျးဖွဈပွီးအားပေး စကားပွောနကွေတာလညျးတှရေ့ပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျတဈယောကျခငျြး စီတိုငျးကို အထူးပဲကြေးဇူးတငျ ရှိပါတယျနျော…။
မိဘပိုက်ဆံမပါဘဲ သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရှာဖွေထားတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ ကားလေးကို ပရိသတ်ကြီးဆီ ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ နေဒွေး
ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွေမှာ တကယ်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့ ဒလမြို့နယ်ကအိမ်ထောင်စု (၁၀၀)စာအတွက် အခြေခံစားသောက်ကုန်များ လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဝေဠုကျော်